Addisuu Araggaa Maaliif Itti qophaa’ee Seenaa Annoolee fi Calanqoo Seenaa Oduu Afaanii ti Jedhe? |
Home Afaan Oromoo Addisuu Araggaa Maaliif Itti qophaa’ee Seenaa Annoolee fi Calanqoo Seenaa Oduu Afaanii...
Addisuu Araggaa Maaliif Itti qophaa’ee Seenaa Annoolee fi Calanqoo Seenaa Oduu Afaanii ti Jedhe?
Damee Boruu: Caamsaa 12, 2019
Hojii Addisuu Araggaa kana nanmu karaa barbaadeen hiikachuu fi hunbachuun dhimma isaa ti. Addisuun waan dubbiin kun hafaan isaa irra dubbatameef itti qaana’uu fi itti gaafatama namummaa haa qabatu malee ijaarsi isaa OPDOn sagantaa qopheessitee dhiyyeessuuf dirqama Ijaarsaa akka qubu dagachuu hin qabnu.
Humni seenaa Uummata Oromoo xurreessee irra deemaa jiru garee OPDO aangoo dhuunfate kana malee Addisuu qofaa miti. Waan hundaa dura dabrsinee kan hubachuu qabnu warri OPDO kun wagga 27 ergamtuu TPLF tahanii ilmaan Oromoo ajjeesaa fi ajjeesisa, Uummata Oromoo saamaa fi saamsisaa warra jiraate. Tokko tokkoon harka isaanii dhiiga ilmaan Oromoon warra dhiqame. Cubamoota nama miti Rabbi iyyuu dhifama hin gooneef akka tahan atakaroo hin qabu.
Yaroo qarree fi qeerroon Oromoo harka qulaa humna Wayyaanee dura dhaabbatanii dhiiga dgangalaasanii, lafee isaanii caccabsanii haqa uummata isaanii falmatan OPDOn hojii ergmaa Waayyaanee adda duraan raawwachaa turte. TPLF yaroo bobbubbeen qabsoo Uummata ishe liqimisuuf jedhe dhiqaalota Habashaa guddifatee, leenjiftee, gurmeessitee of harkaa qabdutti aangoo dabarsitee gara naannoo ishe deebitee humna ishee jabeefachuu filate.
Ergamtoonni TPLF kun utuu seeraa fi heera tokkotti hidhiyaatiin, utuu yaa uummataatti illee dhiyaatanii hin qeeqamnii ofumaa akka ummatni dhiifama isaanii godhee jiru labsatan. Biyya lafaa irra dhiifani akkasii takkaa argamee hin beeku. warri isaan qaama irraa hiri’isaan, warriisaan ijoollee irraa ajjeessan , warri isaan qee’ee isaanii irraa buqqisanii jireenya gadadoof saaxilan dhiifama gochaaf hin jiran. OPDOn maaliif akka nuyi ODP jennee waamnu barbaadi. Seeraa fi heerri ijaarsaa, sagantaan ijaarsaa fi hoogantoonni ijaarsaa warruma harki isaanii dhiiga ilmaan Oromoon dhoqaa’ee tahee utuu jiru maqaa ODP of mogaasan. Yoo ODP jennee waamnu cubbuun OPDOn hojjechaa turte sun hunduu hiraanfatamaa adeema. Isaan illee itti gaafatamaa badii OPDO of irraa qolachuuf yaadaame waan xiyyeefatme dha.
Waan guddaa dagatan. OPDO keessa ilmaan Oromoo uummata isaanii quuqama qaban jiru. Fakkeenyyaa Obbo Lammaa Magrsaa fi Addee Xayyibaa Hasseen adda duraan warra Uummata aangomsuuf deeman akka tahan namni mamu jira natti hin fakkaatu. Diqaallonni Habashaa ODP ofiin jettu kun warra ORomummaan isaan boonan kana illee MNO keessa ni buqqifte. Shira warri kun Uummata Oromoo irratti xaxaa jiran guyyaa marii OroMaraa Afaan Addisuu fi Shimalisi irraa dageennyee jirra.
ODPn ADP itti heerumtee jirti. ADP kan bulchu ABN(NaMa) dha. Yoo yaada kana diriisnee ilaalle(by extension) ODPn harkka ABN itti kuftee jirti. Warri ABN ifatti waraanaaf wixxifachaa jiru. Amma har’atti Walqaayiti, Qimaanti, Oromoo Kamisee, Oromoo Karrayyuu fi Darraa irratti waraana banuun isaanii ni yaadatama. Torbaan darban Uummata Gumuzii dubartii fi daai’imaa garaa jabeenyaa fi hammeenya hiriyyaa hin qabneen fixxuu isaanii caalaa ifatti hiriira bahaanii “ilmaan Shanqilaa irraa baradha warri keenya jettanii isinii dhufna” jechaa turan.
Mootonni Amharaa aadaa warra dadhabaa fi injifataman irratti hammeenya kana fakkaatu hojjechuudhaan akka sodaataman gochuu turan. Towwodroos Oromoo Waloo irraa harka cirree ture. Minilki Annoollee irratti harmaa fi harka Oromoo Arsii cirree, Addisuun illee oduu afaanii ti haa jedhu malee. Calanqoo irratti hammenyi tahe hiriyyaa hin qabu. Hojii aadaa Amharaa fokkisaa fi yakkamaa kana isa raga jiraataa ija keenya duratti aggaru kana OPDOn dhaadhaa irra dibuuf yaalaa jirti. Addisuun hammenyi Anoollee fi Calanqoo caaluu Uummata Oromoo itti aka dhufaa jiru hubatee beekaas haa tahu dagatee ifatti dubbachuun isaa karaa tokko galateefamuu qaba.
qabu OPDOn bilaasha xibaaraa oluun uummata gargaaruuf miti. Diina ammatee akka taa’uu dogonorsuuf yaalaa Hojiin OPDO Uummata Oromoo afanfajjeessuu, dongorsuu, gandaan, amantii fi dantaan adda baasuuf halkanii guyyaa kaachuu. Qeerroo fi Abbootiin Gadaa utuu hin hafiin diigaa jirti. Yaaddoon ishee inni duraa yoo Uummatni Orommo haqa isaa gonfate badii darbeef naan gaafatamnaa sodaa guddaa qabdi. Uummata Oromoo balleesitee badii jalaa of baasuu badii keeaa bahu hin dandeenye keessa dhidhimaa jirti. Uummata Oromoo akkaataa itti orma wajjin jiraatuu barsiisuuf yaroo ishee balleessuun barbaachisaa miti. Waan Uummatni Oromoo jiruu fi jireenyaan of harkaa jirti
Uummatni Oromoo biyyaa isaa irratti abbaa tahuuf eehama gaafachaa hin jiru. Humna isaan goonfata. Biyyaa isaa keessatti yaroo barbaade bakka barbaadatti waan isaaf tahu ijaarrachuun mirga isaa ti. Lafee Jeneral Waqqoo Gutuu, Adam Jiloo, Haji Adm Saddoo, Nadhii Gammadaa, Guutamaa Hawwas, Barisoo Barii, Amhed Bunee, Ismaa’el Ali irra jaajjitee yaroo darbe ilmaan nafxanyyaa akka ilmaan Oromoo sidaa Goota isaaniif Gobaa keessatti hin dhaabne dhorkite. Akkuma kana bultii xiqqoo dura Asallaa keessatti Masgiida Oromoon ijaaratee jalaa diigan. Yoo kana aggarru waan Addisuu fi Shimalisi Abdisaa jedhan salphaatti nuu gala. Kana malee Finfinnee falmachuu duraa Ummatni Oromoo walii dirmannee Gobaa fi Asallaa bilisa baafachuu qabna.
Waggaa afurii yaroo qarree fi qeerroon Oromoo Wayyaanee irratti qabsso gochaa turan maqaa “Fanoo” aktiiviistii Tolsaa ofiin jedhu tokko irraa dhageen ture. Warri kun Wayyaanee dura dhaabbachuun wareegama baasan tokko hin qaban. Har’a haalla mijjawwaa OPDOn isaanii uumte irraa kan ka’e of ijaarramanii fi hidhatanii seera mootummaaf warra hin bule(lawless) tahanii nama saamaa fi ajjeessaa jiru. Walii gala Mootummaa OPDO kana illee mootummaa “Gallaa hin bullu” jedhanii jeequmsa guddaa biyyaa Impaayeera Itoophiyaa keessatti kaasaa jiru. OPDOf diinni ishee duraa WBO waan tahee waan qabduu hundaa WBO irratti bobaasuuf qophaa jirti. Xiyyaarrichis waan ishee gargaare hin fakkaatu. WBO fixxuuf dura dabarsitee Uummata Oromoo fixxuu qabdi. Utuu Uuummata Oromoo damaqistee, ijaartee, hidhachiiftee diinaa irraa akka of eegu gootee Uummatni WBO dhiisee gara ishee itti baqata ture. Guyyaa guyyaan hojii fi dhaabbiin OPDO akka Uummatni Oromoo abdii irraa kutatee ishee baqatu gochaa jira.
Previous articleEthiopia’s garment workers make clothes for some of the world’s largest clothing brands but get paid the lowest
Next articleHistorical aspects of landgrab in Ethiopia with political game linked to land tenure of successive regimes (1889 – 2018)